I-PLAYBOI CARTI: UKUPHONONONGWA KWEALBHAMU YEALBHAMU - IINDABA
Ityala elisemthethweni le-rapper yase-Atlanta yi-albhamu esebenza phantse ngokupheleleyo kwisicatshulwa sayo senyanga. Siswekile esosulelayo esigqwetheke ngokugwenxa, i-rap ethi iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iskhalwelwe nomntwana, nokuba sisifo esosulelayo esigqwetheke ngendlela engaginyisi mathe.
Ukuba ngumrepha omkhulu akuzange kube yinto eyimfuneko yokwenza umculo omnandi we-rap, kodwa bambalwa abavakalisi abaye bavavanya eso siqalo ngokuqatha njengePlayboi Carti. Vula igama lakhe lokuqala le-2017 , I-twitchy rapper yaseAtlanta ibuyekeze ukusilela kwayo njengemvumi enombono kunye nomoya, egxotha ii-ad-libs zakhe ezinamathelayo kwisithokothoko, ukubetha gummy okwakudlala ngengqondo ephambeneyo yekhosi yesithintelo e-Double Dare. Damn, i-shit yam inamandla, uCarti waqhayisa, kwaye yayiyinyani. Okwangoku, ngokumangalisayo, loo projekthi ivakala iphantse yagcinwa xa kuthelekiswa Ikhanyisiwe , Iswekile ephezulu yemizuzu engama-57 iphantse ibe yeyasendle, iphazamise ngakumbi, kwaye ichaphazeleka ngakumbi kunangaphambili.
Oovulindlela be-swag-rap baseAtlanta uTravis Porter noRich Kidz bahlahle indlela yohlobo lweCiddi's giddy, kodwa nkqu abakhange bayise kwiindawo ezigabadeleyo. Ikhanyisiwe Ngaba konke ukuzalisa ukhilimu, akukho Oreo. Kukuvumela umntwana oneminyaka emi-4 agalele isaladi yakhe yokunxiba emva koko abukele njengoko eyikhukulisa ngokupheleleyo ipleyiti yakhe ngeHidden Valley Ranch. Ngawo lawo manqanaba kaMario apho imibhobho kunye namafu echitha iingqekembe ezininzi kangaka kunye nenye-up kuwe ukuba uyazibuza ukuba kutheni uchithe onke amanye amanqanaba uwaqokelela nganye nganye. Lo ngumculo osisiseko esihlaziya kwakhona amaziko emivuzo yengqondo.
Kwakhona, uyilo oluphambili ngasemva kwezi thethani ziqhekekayo ngumvelisi uPierre Bourne, osebenza kwindawo yogcino lwento evakala ngathi yimidlalo ye-Gameboys, ii-subwoofers ezikruquliweyo, kunye neziqwengana kunye nezikrufu zeerekhodi zeRatatat. U-Bourne yindoda enye ye-Acme Corporation ye-Assembly line, kwaye eCarti ufumene i-foil efanelekileyo ngenxa yobubi bakhe, i-iconoclast edlelanayo ngokufanayo ikulungele ukuvavanya imida phakathi kwe-catchy ne-obnoxious. Aba babini banenye ye-quixotic chemistry yayo nayiphi na umvelisi / i-rapper combo okoko uZaytoven noGucci Mane baphazamisa i-rap yaseAtlanta ngaphezulu kweminyaka elishumi eyadlulayo.
Apho ubude obugcweleyo beCarti kunyaka ophelileyo yayiyi-mixtape, Ikhanyisiwe Kuthengiswa njengesiqalo sakhe esisemthethweni, esihlala sihlala xa kuthathelwa ingqalelo ezorhwebo kwaye ulonwabo luphela. Kodwa ngelixa i-albhamu ilayishwe ngeempawu zeendwendwe, kubandakanya nezovela kuTravis Scott kunye noNicki Minaj, khange baphazamise umbono wabo we-surrealist. Nkqu noFell eLuv (feat. UBryson Tiller) akakho njengongxolayo njengoko isihloko sisongela; yingoma nje edlalwa ngokungacacanga yePlayboi Carti enendinyana kaBryson Tiller exubeke okomntu ozama ukuyicima emva koko wancama. Ngeepiyano zayo zoloyiso, ingoma ka-Lil Uzi Vert-yonyusa u-Shoota yi-albhamu eyenye evumayo kwimbono kanomathotholo yokulunga, kodwa yeyona nto iphambili kwingoma, kwaye isebenza njengefestile kwilizwe elingaphandle kwesitudiyo sikaBourne, Ukuqaqambisa indlela engaqhelekanga nengalunganga ngayo yonke iminqwazi ejikeleze yona.
Kakhulu, Ikhanyisiwe kusebenzisa amazwi angaphandle njengeziqendu ezivakalayo. I-icon engcolileyo yaseLondon uSkepta uphakamisela indlela yakhe kwiLean 4 Real, kwaye nangona isinciphiso sakhe sisika umahluko omkhulu ngokuchasene naphina umrepha waseMelika, nantsi nje ukubizwa kwakhe nje okuza kothusayo. I-Thug encinci ijoyina iCarti ekwenzeni ingxolo eninzi e-Choppa Awuyi kuphoswa, kwaye zivakala ngathi abantwana badlala ngaphezulu kwesifuba sokudlala. UBourne ude afumane iivesi ezimbini, kuba phantse naliphi na ilizwi liya kwanela kumculo onje, kwaye inkonzo yakhe inokulunga ngokwaneleyo (Iingxowa zekamva / Ngaba zonke iikhompyuter ziyinto entle eqinisekileyo yomvelisi).
Kwimeko ye-rap yaseAtlanta edla ngokuqhubela phambili ngokuthe chatha, kunye namagcisa akha ichibi ekwabelwana ngalo leembono kunye nokuqhubela phambili ukuphumelela kwabanye, Ikhanyisiwe yi-anomaly, i-albhamu esebenza phantse ngokupheleleyo kwisicatshulwa sayo senyanga. Okona kulungileyo-oko kukuthi phantse yonke le nto, ngokwenyani-icwecwe phantse libonakala limisa umxhuzulane. Umrhwebi uyisusa njani le projekthi kolu fakelo lombane? Hayi, ukudlwengulwa kukaCarti akukho ngcono ngeli xesha. Kwaye hayi, ayinamsebenzi. Xa i-carnival ngokwayo ibubungangamsha obunje, akukho sidingo sokukhetha inkokeli.
UAdam Green kuBawo wasebusuku uJohn Misty weza kwigumbi laseMacaulay Culkin
U-Lana Del Rey ucacisa izimvo malunga nabasetyhini kwiNew James Franco Udliwanondlebe
Ingcwele Roller Novocaine
Ikona yesitalato iNew York ngoku ebizwa ngokuba yiWu-Tang yeSithili seClan
IGatsby enkulu yeGatsby
Ifilimu kaBarry Jenkins Ukuba iSitalato iBeale sinokuthetha ngeNgoma eVakalisiweyo
ol emdaka rasta rapper
kod j cole intsingiselo
kevin morby ecula wabona
ukufa kuyabamba iveki yefashoni vinyl
ujana molina ngenye imini
akukho manzi kuwe